ज्योतिष शास्त्रः कुन समयमा जन्मिएकाहरुको भाग्य कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् ! – Khabar PatrikaNp
ज्योतिष शास्त्रः कुन समयमा जन्मिएकाहरुको भाग्य कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् !
August 8, 2020 83
एक व्यक्तिको जन्म भएपछि, उसको मुहूर्ता र नक्षत्र कुन तर्फ छ , कुन मितिमा, कुन पक्षमा उसको जन्म भयो ,त्यसले उसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। कुन प्रहरमा जातकको जन्म भयो भन्ने थाहा भएर मात्र उसको भविष्य निर्धारण गर्न भने निकै गार्हो हुन्छ किनकि यसको लागि नक्षत्र, मुहूर्ता जस्ता कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । जान्नुहोस जन्म कुन प्रहरमा भएको सम्बन्धमा सामान्य जानकारी ।
दिनको तेस्रो प्रहर
दिनको तेस्रो प्रहरलाई अपरान्ह भनिन्छ । यो समय दिउँसो १२ देखि अपरान्ह ३ बजेको बीचमा हो । यो तमोगुणी समय हो । यस प्राहरमा जन्मेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको सुरूमा शिक्षाको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। शिक्षामा अवरोधहरू आउँछन् । यो समयमा जन्म लिने व्यक्ति निकै जिद्दी पनि हुने गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रकृति बुझेर उनीहरूसँग समझदार भएर काम गर्यो भने मात्र यिनीहरुले आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न सक्छन् ।
यो प्रहरमा के गर्नुपर्छ
दिनको तेस्रो प्रहरलाई अपरान्ह वा सातौं प्रहर पनि भनिन्छ। यो तमोगुणी समय हो । यो समयमा खाना खान उत्तम छ तर निदाउन र नुहाउन भने उपयुक्त छैन । यो समय कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न भने निकै उत्तन मानिन्छ । यो समयमा भगवान श्रीकृणको पूजा गर्नाले सन्तान नहुने समस्याबाट छुटकारा पाउँन सकिने विस्वास छ ।
Prevज्योतिष शास्त्र अनुसार कुन बार के गर्दा सफलता मिल्छ ?
Nextप्रसिद्ध तीर्थस्थल, हलेसी महादेव जहाँ दर्शन गरेमा निःसन्तानलाई सन्तान मिल्ने विश्वास ॐ लेखी एक सेयर गरौं
कुवेतको अस्पतालमा जीवन मरणको दोसाँधमा ”म आफ्नै देशमा मर्न चाहान्छु मलाइ नेपाल फर्काइदिनुहोस्
आमा छोरीको १२ वर्ष पछी मिलन: डाँको छोडेर रुदाँ कसैको आँसु थामिएन् … (हेर्नुस् भिडियो)
कोरोना सार्न आएको भन्दै ७ महिनाकी गर्भवती महिला कुटिएकी छन्
वडाध्यक्ष दुई पत्नी हुँदा हुँदै अर्कैकी पत्नी लिएर भागे
असाध्यै सुन्दर र ठुली भइन् ‘बजरंगी भाइजान’की मुन्नी [ तस्बिर]